Kingsley Coman Tantara Mitantara ny Tantaram-pianakaviana Zava-bita
Alexander Sorloth Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Francisco Trincao tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Matheus Pereira Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Alex Telles Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Kingsley Coman Tantara Mitantara ny Tantaram-pianakaviana Zava-bita
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Rat Tail". Ny tantaranay Kingsley Coman momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra firy momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony haingana, saingy vitsy no mihevitra ny Bio Bio Kingsan Coman izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana taloha & fampanantenana
Kingsley Coman dia teraka tamin'ny andro 13 tamin'ny 1996 tamin'ny volana jona tao amin'ny departemantan'i Seine-et-Marne, Paris, Frantsa. Izy no teraka tamin'ny mamanay Frantsay fotsy ary ny rainy, Christian Coman izay miala avy ao Guadeloupe, izay fiaviana mitovy amin'izany Thierry Henry, Claude Makelele, Lilian Thuram ary Frank Leboeuf. Kingsley dia mpankafy Thierry Henry Ny talentany dia nandrisika azy handray ny baolina kitra ho toy ny zaza.
Nanomboka ny asany i Kingsley fony izy enin-taona, niditra tao amin'ny US Sénart-Moissy tao 2002 alohan'ny hidirana tao Paris Saint-Germain tao amin'ny 2004.
Araka ny filazan'ny dadany azy, "Zazakely nitomany i Kingsley taorian'ny lalao na fifaninanana very. Tsaroako ny fifaninanana baolina kitra any Lille. Ny ekipany dia nitarika tanjona tao amin'ny semifinals ary izany dia nitarika tamin'ny 1-0. Avy hatrany dia nanomboka nitomany izy. Little Kingsley dia nandray ny baolina tao amin'ny tanjony, ary nitondra izany tany amin'ny foiben'ny fanoloran-tena ary nanombohany ny kickoff. Nandao ny baolina niverina tany aminy ilay mpiara-milalao azy ary 'King' no nanosika ny ekipa mpanohitra rehetra mba hizara. Ity no taona voalohany zandriny tao amin'ny PSG. Androany, tsy mitomany ny mitomany. Rehefa very ny lalao lehibe izy, nilaza ny sipany sy ny vadiny fa tsy miresaka amin'ny olona izy mandritra ny andro iray fara fahakeliny. "
Kingsley dia nitombo ny laharana PSG satria noheverina ho tanora mpilalao tanora sy tanora indrindra PSG. Tamin'ny taona 10 dia efa nilalao niaraka tamin'ny laharana 14 izy noho ny fahaiza-manaony. Kingsley indray no niova kely tamin'ny taona nahalehibe azy tao amin'ny PSG.
Coman dia nanao ny laharana voalohany tamin'ny PSG tamin'ny 17 February 2013. Ny endrika dia nahatonga azy ho mpilalao tanora tao amin'ny tantaran'ny PSG tao amin'ny 16 taona, valo volana sy efatra andro. Coman dia nifindra tany Juventus tamin'ny 2014 tamin'ny fiafaran'ny fifanarahana nataony, nandresy ny Sera A sy Coppa Italia tamin'ny fotoana voalohany nahatongavany tany Italia. Tamin'ny volana aogositra 2015, nafindrany ho an'i Bayern Munich izy, nandresy dingana iray hafa tamin'ny fotoana voalohany. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Misy miteny hoe; "Ny tena lehilahy dia tsy tia ny ankizivavy mahafatifaty indrindra, tiany ilay tovovavy afaka mamorona izao tontolo izao tsara tarehy indrindra." Ho an'i Coman, mifandray amin'ny hatsaran-tarehy izay mbola mahafinaritra ny tontolo iainany. Ny modelin'ny frantsay Sephora Goignan dia manana zaza ho azy.
Sheignora tsara tarehy Goignan dia fantatry ny mpiara-mianatra aminy be mpahalala noho ny tsy fahampian'ny fanohanana ny lehilahy izay hita eo amin'ny sary etsy ambany. Mijery tsara tarehy sy anjely izy ary afaka mamorona lehilahy manana lolo maro eo amin'ny vavony.
Tena tompon'andraikitra i Sephora Goignan ka naka fotoana mihitsy aza izy mba hanao ny kavina nataon'i Kinsley izay midika hoe tontolo ho azy.
Na dia eo aza ny fitiavana, maro no nanontany ny antony mahatonga an'i Coman ho tsy misy dikany amin'ny karazana vehivavy ananany. Hambara ny fahamarinana. Nifaly ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny volana 2017 taorian'ny nanafihan'i Kingsley azy. Hanome anao fahapotehana izahay.
Kingsley dia nandoa vola £ 4,390 noho ny fanafihana an'i Sephora Goignan izay nahafahany niasa nandritra ny valo andro. Coman, raha nanontaniana, dia nilaza fa very ny hatezerany rehefa namoaka sary tao amin'ny kaontiny Instagram izy raha tsy nahazo alalana. Raha tokony hanatrika fampiofanana izy dia nandany herinandro maromaro tany amin'ny fitsarana Frantsay taorian'ny filazana fa meloka tamin'ny herisetra an-tokantrano. Nanaiky ny fiampangana ilay mpihira saingy tsy nety nanao fanambarana izy taorian'ny fisehoan'ny fitsarana. Nosazin'ny Bayern München avy eo i Coman tatỳ aoriana noho ny fanafihana izay nanenenany.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tatitra manokana
Kingsley Coman dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Strengths Kingsley Coman: Adaptable, fahafahana hianatra haingana ary hanova hevitra. Kingsley Coman dia anarana lazaina fa haingana araka izay hita etsy ambany.
Ny fahalemen'i Kingsley Coman: Indraindray izy dia mitebiteby izay mety hitarika herisetra ao an-tokantrano. Ankoatra izany, mety ho tsy mifanaraka sy tsy manaiky izy.
Inona no tian'i Kingsley Coman: Manao dia lavitra amin'ny tanàna, milalao mozika, mamaky gazety isan-karazany, ary mifampiresaka amin'ny namana akaiky.
Inona no tsy tia an'i Kingsley Coman: Ny maha-irery azy, voafetra, famerimberenan'ny asa fanofanana hafahafa sy ny fomba mahazatra.
Anatin'ny famintinana, maneho toetra roa samihafa i Coman izay tsy ho fantatrao izay ho hitanao. Azony atao ny miara-miasa, mifampiresaka ary vonona ho amin'ny fahafinaretana. Coman dia mety ho tafahoatra tampoka amin'ny fotoana tsy itiavanao azy. Maro no nilaza fa ny naman'i Renato Sanchez no nahalala azy.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny ozona malemy
Kingsley Coman indray mandeha alina ratsy - na eny an-kianja na eny eo amin'ny lohany. Nanomboka ny fampisehoana raha niasa ho an'ny gigabatin'ny Bundesliga ny Frantsay noho ny lalao ligin'ny lalaon-dehiben'ny lalaon-dehiben'i Atletico Madrid, izay nandresy ny Athletico noho ny fahadisoany.
Nefa ankoatry ny tanjona mahavariana nanakorontana ny ekipany dia zavatra iray hafa no nahasarika ny mason'ireo mpankafy nijery ny lalao tao an-trano: Ny volo-n'i Coman no sary etsy ambany.
Amin'ny ankapobeny, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, dia nanapa-kevitra i Coman hilalao eo anoloan'ny mpijery an'arivony sy mpijery an-tapitrisany mampiseho azy ny volon'ilay rat eo anilan'ny lohany. Taorian'ny fahaverezan'ny lalao dia nahatezitra ny mpankafy ny volony. Ohatra avy amin'ny bitsika hita etsy ambany.
Mazava ho azy, araka ny azonao an-tsaina, ireo mpankafy dia haingana ny manondro ny volony ary tena tsy mamela ny hanome tsiny azy noho ny fahaverezany. Na dia teo aza ny fanafihana rehetra teo amin'ny volony, dia tsy nanan-kambara mihitsy i Kingsley. Mbola mitoetra foana ny volony toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tsy Nanan-tahotra
Coman dia tsy saro-kenatra maneho ny heviny. Amin'ny famaritana ny fotoanany nilalao niaraka tamin'i Zlatan Ibrahimovic tao amin'ny PSG, nilaza i Coman mikasika ny Soedoà: "Ny fifandraisako amin'ny Ibrahimovic dia tsy niandany mihitsy. Tsy izy no karazana mpilalao hanatona ny mpilalao tanora ary hanome torohevitra azy ireo. Miahy fotsiny ny tenany izy. "
Na izany aza, manana fiderana ambony kokoa i Coman Pep Guardiola: "Izy no mpanazatra tsara indrindra eran-tany, araka ny hevitro. Nanjary tsara aho teo ambanin'i Pep, izaho got a betsaka ny lalao ary nampiseho finoana lehibe tamiko izy. "
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Costa Partnership
Coman sy Douglas Costa dia nifanentana tanteraka tamin'ny fihaonana tamin'ny FC Bayern Munich. Amin'ny ratra nahazo azy Arjen Robben ary Franck Ribery nandà ny kianja Allianz mahatoky ny mason'ny 'Robbery' amin'ny fiaramanidina manontolo, nahitana ny fampisehoana an'i Costa sy Coman teo amin'ny elatra ireo haingam-pandeha avy any Bayern ny dubo azy 'Ny CoCo Analysis'.
Kingsley Coman Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Football Persone
Matetika no heverina ho iray amin'ireo tanora mpilalao sarobidy indrindra amin'ny taranany, Coman dia mpihazakazaka haingana sy manan-talenta ary ara-teknika, miaraka amin'ny fahaiza-manaony mahavariana, fahitana, haingana ary na dia haingana aza. Kingsley dia afaka milalao eny amin'ny sisintany na eny afovoan-tanàna, na miditra na miditra amin'ny lalao midika na mpifaninana.
Dia Hianao dia mazava ho tsara-tongotra, ny nisafidy toerana eo amin'ny ankavia, izay mamela azy ho nikapoka Ny Mpanohitra Ny iray amin'ny iray toe-javatra, nanapaka tao an-foibe teo tongony ankavanana, ary na nitifitra ny tanjona, mamorona vintana ho an'ny ekipa, na Ataovy izay hanafihana any amin'ny faritra. Tamin'ny taona 2015, Don Balón antsoina hoe Coman, iray amin'ireo tanora mpilalao 101 tsara indrindra eran-tany
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Kingsley Coman momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Bayern Munich Diary
Tantara momba ny fahazazana Flick Hansi-Dieter miampy Untold Biography Facts
Massimiliano Allegri tantaram-pahaterahana momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Zava-misy momba ny tantaram-pitiavana i Javi Martinez momba ny tantaram-pahaterahana
Serge Gnabry ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Ny tantaran'i Leon Goretzka momba ny tantaram-pitiavam-bahoa tsy hita isa
Ny tantaran'i Niklas Sule Childhood Plus untold
Daty efa namboarina: 26 septambra 2020
Daty efa namboarina: 25 septambra 2020
Daty efa namboarina: 23 septambra 2020
Daty efa namboarina: 19 septambra 2020
Tianao ny eritreritrao, azafady atao hevitra.x
Ny tantaram-piainan'i Douglas Costa Childhood Plus untold
Daty efa namboarina: 3 septambra 2020
Ny tantaran'i Franck Ribery momba ny tantaram-pahaterahana malaza dia mbola tsy voamarina momba ny tantaram-piainana